I-TextMagic: Ipulatifomu Yokufaka Imiyalezo Yebhizinisi Egcwele Ngokugcwele (i-SMS) | Martech Zone
NgoMsombuluko, Agasti 17, 2020 NgoMsombuluko, Agasti 17, 2020 Douglas Karr
Noma ngabe ukufakazela ubuqiniso bezinto ezimbili noma ukwenza ukubhuka kwesidlo sakusihlwa, sengiqala ukuqaphela ukuthi ngikhululeke ngokwengeziwe ukusebenzisa imiyalezo (i-SMS) kunalokho ebengineminyaka embalwa eyedlule. Angicabangi ukuthi yimina ngedwa… abathengi namabhizinisi ngokufanayo bathokoze kakhulu ukuthumela nokwamukela imiyalezo kunokuba baphazanyiswe izingcingo.
Okusemqoka-ke nokho ukuthi ungakuphatha kanjani konke lokho ukuxhumana ezingeni lebhizinisi. Yilapho izinkundla zokuthumela imiyalezo zisebenza khona. Ngamapulatifomu afana UmbhaloMagic, ibhizinisi lingathumela izaziso, izexwayiso, izikhumbuzi, iziqinisekiso, nemikhankaso ye-SMS Marketing kusuka kusixhumi esibonakalayo esisodwa somsebenzisi.
Izibalo Zokuthumela Umbhalo
Imilayezo yombhalo eyizigidi eziyi-15.2 ithunyelwa njalo ngeminithi emhlabeni wonke
I-95% yemiyalezo ebhaliwe ifundwe kungakapheli nemizuzu engu-3 ithunyelwe
Abantu abayi-4.2 bhiliyoni bathumela imiyalezo emhlabeni jikelele
Imizuzwana engama-90 yisikhathi sokuphendula semilayezo yombhalo
Abantu abangama-75% bakhetha ukunikezwa okuthunyelwa ngombhalo
Izici ze-SMS ezikhulisa ibhizinisi lakho
Thumela Imibhalo Online - Thumela umbhalo online kubasebenzi bakho kanye namakhasimende. Ngenisa oxhumana nabo futhi uphathe uhlu lonke nge-akhawunti yakho ye-TextMagic.
Thumela i-imeyili ku-SMS - Ukuthumela imibhalo kusuka ku-imeyili kulula. I-TextMagic iguqula i-imeyili yakho ibe ngumlayezo wombhalo bese uyihambisa, nazo zonke izimpendulo bese zifika njengama-imeyili.
I-SMS Gateway API - Hlanganisa isango le-SMS le-TextMagic newebhusayithi yakho noma isoftware usebenzisa amathuluzi we-SMS API bese ungeza imiyalezo ekuhambeni komsebenzi kwebhizinisi lakho.
Isoftware ye-SMS ye-PC neMac - I-TextMagic Messenger wuhlelo lwedeskithophu olukuvumela ukuthi uthumele imiyalezo ebhekiswe kubalaleli bakho, kungaba munye ngasikhathi noma ngobuningi.
Ingxoxo Yezindlela Ezimbili - Thumela futhi wamukele imilayezo yombhalo osheshayo ngengxoxo ye-SMS ye-TextMagic online. Ilungele ukuxhumana okukude nabasebenzi namakhasimende.
Uhlu Lokusabalalisa Kwe-SMS - I-imeyili ethunyelwa kukheli lohlu lokusabalalisa idluliselwa ngokushesha njengombhalo wombhalo kuzo zonke izinombolo zeselula ezigcinwe ohlwini.
Thola i-SMS Online - Sebenzisa izinombolo ze-SMS ezinikezelwe noma ezabiwe ze-TextMagic ukuthola i-SMS engenayo nezimpendulo kumiyalezo yakho evela kumakhasimende nakubasebenzi.
Ukutholakala kwe-Global Global - Finyelela amakhasimende akho nabasebenzi emhlabeni wonke ngokufinyelela kumanethiwekhi weselula angaphezu kuka-1,000 200 emazweni angama-XNUMX +.
Uhlelo lokusebenza lwe-iOS ne-Android - Thumela ngokushesha futhi wamukele imibhalo ye-SMS, dala uhlu noxhumana nabo, phatha imikhankaso yakho endizeni usebenzisa ifoni yakho ephathekayo.
Ukuhlanganiswa kwe-Zapier SMS - Sebenzisa iZapier ukuxhuma i-TextMagic ngezinhlelo zakho zokusebenza ozithandayo. Kuyinto ezenzakalelayo elula esiza ibhizinisi lakho.
Ukungena ngemvume okukodwa kwamabhizinisi - Ngena ngemvume ku-TextMagic usebenzisa imininingwane yakho ephephile futhi unikeze ukufinyelela kumalungu eqembu lakho
Izixazululo ze-Enterprise SMS - Izixazululo zebhizinisi zifaka izingodo zokucwaningwa kwamabhuku, ukufinyelela kweqhaza, kanye ne-SSO okungenye yezici ezikusiza ukuthi ukhule.
Ucwaningo lwe-SMS lokuqoqa impendulo - Thuthukisa isipiliyoni samakhasimende futhi uthole impendulo ebalulekile kumasevisi akho ngaso leso sikhathi nakunoma iziphi izithameli.
I-SMS Yesibili Esinesiqinisekiso (2FA) - Qinisekisa abasebenzisi ngemilayezo yombhalo, uvikele ukuthengiselana okusezingeni eliphansi, bese ufaka isendlalelo esingeziwe sokuphepha kwisoftware yakho.
Ukubheka Kwenkampani yenethiwekhi nokuqinisekiswa kwenombolo - Thola izinombolo zocingo ezingavumelekile nabathwali ngokushesha bese uthola imiphumela engcono namazinga wokulethwa ngemikhankaso yakho ye-SMS.
Ukubheka nokuqinisekisa i-imeyili - Bheka isimo, ukulethwa, kanye nezinga lobungozi lamakheli e-imeyili ngensizakalo yokuqinisekisa i-imeyili ye-TextMagic ne-API.
Ukuqala nge-TextMagic Kulula
Ungaqala ngezinyathelo ezintathu ezilula. Dala i-akhawunti YAMAHHALA, layisha isikweletu esikhokhelwa bese uqala ukuthumela nokwamukela imibhalo.
Dala i-Akhawunti Yamahhala - Bhalisela i-akhawunti yakho yamahhala ukuze uzibonele ukuthi kulula kangakanani. Zama zonke izici bese usebenzisa isikweletu samahhala ukuthumela nokwamukela imilayezo cishe noma kuphi emhlabeni.
Layisha isikweletu esikhokhelwa kuqala - Uma usukulungele ukuthumela umlayezo wakho wokuqala ngobuningi, sebenzisa izinkokhelo zethu ezilula ezikhokhwa kusengaphambili ukukhokha njengoba uhamba (akunazinkontileka, izindleko ezifihliwe noma imali eqhubekayo).
Thumela & Thola i-SMS - Thumela futhi wamukele i-SMS noma kunini lapho udinga khona nge-interface yethu elula yokuzisebenzela. Kulula njengokuthumela i-imeyili noma i-SMS efonini yakho.
Bhalisela i-Akhawunti Yesivivinyo Samahhala Sombhalo
Ukudalulwa: Siyi- UmbhaloMagic Inxusa.
Tags: imeyili ku-smsSMSsms aphiipulatifomu ye-smsumlayezo wombhaloukuthumela imiyalezo apiipulatifomu yokuthumela imiyalezoumbhalo